Laptop ပေါ်ကို ရေမတော်တဆဖိတ်ကျခဲ့ရင် ဘာပြုလုပ်သင့်သလဲ?
12 Mar 2018 . 11:22 AM
အခုအချိန်မှာ Laptop အသုံးပြုမှုဟာ အခြေအနေတစ်ခုအထိမြှင့်မားလာပြီး နေရာတကာသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူတာ၊ ရုံးခန်းတွေမှာလည်း ရွေ့ပြောင်းရပိုလွယ်ကူတဲ့အတွက် Laptop ကိုပိုပြီး ဦးစားပေးအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Laptop အများစုဟာ ရေစိုဒဏ်ကိုမခံနိုင်ကြတဲ့အတွက် ရေ၊ ကော်ဖီခွက်မှောက်ကျပြီး ရေဝင်သွားရင် ပျက်စီးတာများပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုဖော်ပြပေးမယ့် နည်းလမ်းကို ရေ (သို့) အရည်တစ်ခုခုဖတ်ကျသွားတာနဲ့ချက်ချင်းပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကို အနည်းနဲ့အများကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး ကော်ဖီပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရေပဲဖြစ်ဖြစ် Laptop ပေါ်ကိုဖိတ်ကျသွားတယ်ဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်လက်နဲ့ Laptop ပါဝါခလုတ်ကို ရေခြောက်အောင်အရင်သုတ်ပါ။ အဝတ်စနဲ့ သုတ်တာကပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
ကွန်ပျူတာကို ပိတ်ပါ။ ဒီနေရာမှာ ပုံမှန်အတိုင်း ကွန်ပျူတာကို Setting ကနေတစ်ဆင့်ပိတ်တာမဟုတ်ပဲ ပါဝါခလုတ်ကို ကွန်ပျူတာပိတ်သွားတဲ့အထိ ၅ စက္ကန့်လောက်ဖိထားလိုက်ပါ။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ တကယ်ကို Laptop ကွန်ပျူတာကို Power Adapter တပ်ထားတယ်ဆိုရင် တဖက်မီးပလပ်ခုံမှာထိုးထားတဲ့ Adapter ခေါင်းကို အရင်ဖြုတ်ပြီး Laptop က Power Adapter ကိုဖြုတ်ပါ။ Laptop အများစုဟာ Battery ကို ဖြုတ်လို့ရတဲ့အတွက် စက်မဖွင့်ရပဲ Battery ဖြုတ်လို့ရတယ်ဆိုရင် Battery ကိုပါ ဖြုတ်ထားလိုက်ပါ။
အဲ့လိုလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ကွန်ပျူတာမှာ လျှပ်စစ်ရှော့မရှိနိုင်တော့ပါဘူး။ အခြားတပ်ဆင်ထားတဲ့ Memory Stick, Cable, Mouse အစရှိတာတွေကိုပါ ဖြုတ်ပစ်ပြီး တကယ်လို့ Warranty Seal မရှိတော့ဘူးဆိုရင် Screw Driver နဲ့ Laptop ရဲ့ RAM (ဒါမှမဟုတ်) Hard disk ကို ဖုံးထားတဲ့ အဖုံးကိုဖွင့်ပြီး RAM နဲ့ Hard disk ကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။ တခါတလေ တချို့ Laptop တွေဟာ RAM နဲ့ Hard disk ကို သီးခြားမဖုံးအုပ်ထားပဲ အောက်ခြမ်းတစ်ခုလုံးကို ဖွင့်ရတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်.. အဲ့ဒီလိုဖွင့်တဲ့အချိန်ကြရင် အောက်ခြမ်းဘက်မှာရှိတတ်တဲ့ ကော်၊ ကလစ်တွေကို မကျိုးအောင် ကတ်ထူပြားအမာတစ်ခုနဲ့ တဖြည်းဖြည်းခွာပြီးဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ဖိတ်ကျတဲ့ အရည်က သာမန်ရေမဟုတ်ပဲ အအေး (သို့) ကော်ဖီလို စေးကပ်ကပ်အရာတစ်ခုဆိုရင်တော့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ Service Center ကို အမြန်ဆုံးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ရေပဲဖိတ်ကျခဲ့တာဆိုရင်တော့ ပြန်ပြီးခြောက်သွေ့အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းရှိဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ အဝတ်စတစ်ခုကို ယူပြီး စားပွဲပေါ်မှာဖြန့်ခင်းထားလိုက်ပါ။ Tower လို ရေစုတ်နိုင်တဲ့အဝတ်အထူမျိုးဆိုရင် ပိုအဆင်ပြေမှာပါ။ ပြီးရင် Laptop Screen ကို ဖွင့်လို့ရတဲ့အထိ ဖွင့်ထားပြီး မှောက်လျက်အနေအထားနဲ့ အနည်းဆုံး တနာရီကနေ ၂ နာရီလောက်ထိ အခုနကဖြန့်ခင်းထားတဲ့ အဝတ်ပေါ်မှာတင်ထားလိုက်ပါ။
တကယ်လို့ ရေခြောက်လောက်ပြီထင်ရင် အခုနက ဖြုတ်ထားတဲ့ RAM, Hard disk နဲ့ Battery တွေကို ပြန်တပ်ပြီး ပါဝါဖွင့်ကြည့်ပါ။ များသောအားဖြင့် ပြန်ကောင်းလာနိုင်ပြီး တကယ်လို့ ပါဝါပြန်မတက်လာရင်တော့ Service Center ကိုပဲပြကြည့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချက်တွေကတော့ တကယ်လို့များ ကိုယ့် Laptop ပေါ်ကို ရေ၊ ကော်ဖီ မတော်တဆဖိတ်ကျခဲ့ရင် အမြန်ဆုံးပြုလုပ်သင့်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အဲ့လိုမှောက်ကျမှုမျိုးကို ကြိုတင်ကာကွယ်ထားနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။
ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲဆိုရင် Laptop ဝယ်ယူတဲ့အချိန်မှာ မတော်တဆရေဖိတ်ကျတာကို ခံနိုင်တဲ့ Spill-resistant Keyboard ပါဝင်တဲ့ Laptop တွေကို အရင်ဦးစားပေးရှာကြည့်ပါ။ အဲ့လို Spill-resistant ခံနိုင်တဲ့ Laptop တွေက လက်ရှိအချိန်မှာ ရှားသွားပေမယ့် အချို့သော Brand တွေမှာတော့ ရရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ ရေဖိတ်ကျခဲ့ရင် Laptop ကို နောက်ဖုံးဖွင့်ရဖို့ လိုအပ်နိုင်တဲ့အတွက် အနည်းဆုံးတော့ Laptop ဝယ်ပြီဆိုရင် ဘယ်လိုမျိုးဖွင့်ရလဲဆိုတာကို တစ်ခါထဲ စုံစမ်းထားသင့်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ကတော့ ကိုယ်တိုင်က Laptop သုံးတော့မယ်ဆိုရင် ကော်ဖီပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရေပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအတိုင်း အဖုံးမပါတဲ့ခွက်နဲ့ သောက်တာထက် အဖုံးပါတဲ့ခွက် ဒါမှမဟုတ် ပုလင်းတစ်ခုခုနဲ့ သောက်တာက ပိုပြီး စိတ်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် Laptop က ရေစိုသွားရင် ဒီအတိုင်းမထားပဲနဲ့ အပေါ်က အချက်တွေကိုပြုလုပ်ပြီး အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုယ့်ရဲ့ အဖိုးတန် Data တွေမပျက်သွားအောင် ကာကွယ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုအခြိနျမှာ Laptop အသုံးပွုမှုဟာ အခွအေနတေဈခုအထိမွှငျ့မားလာပွီး နရောတကာသယျဆောငျရလှယျကူတာ၊ ရုံးခနျးတှမှောလညျး ရှပွေ့ောငျးရပိုလှယျကူတဲ့အတှကျ Laptop ကိုပိုပွီး ဦးစားပေးအသုံးပွုလာကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Laptop အမြားစုဟာ ရစေိုဒဏျကိုမခံနိုငျကွတဲ့အတှကျ ရေ၊ ကျောဖီခှကျမှောကျကပြွီး ရဝေငျသှားရငျ ပကျြစီးတာမြားပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အခုဖျောပွပေးမယျ့ နညျးလမျးကို ရေ (သို့) အရညျတဈခုခုဖတျကသြှားတာနဲ့ခကျြခငျြးပွုလုပျပေးမယျဆိုရငျ ပကျြစီးဆုံးရှုံးမှုကို အနညျးနဲ့အမြားကာကှယျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ကှနျပြူတာကို ပိတျပါ။ ဒီနရောမှာ ပုံမှနျအတိုငျး ကှနျပြူတာကို Setting ကနတေဈဆငျ့ပိတျတာမဟုတျပဲ ပါဝါခလုတျကို ကှနျပြူတာပိတျသှားတဲ့အထိ ၅ စက်ကနျ့လောကျဖိထားလိုကျပါ။
နောကျတဈခကျြကတော့ တကယျကို Laptop ကှနျပြူတာကို Power Adapter တပျထားတယျဆိုရငျ တဖကျမီးပလပျခုံမှာထိုးထားတဲ့ Adapter ခေါငျးကို အရငျဖွုတျပွီး Laptop က Power Adapter ကိုဖွုတျပါ။ Laptop အမြားစုဟာ Battery ကို ဖွုတျလို့ရတဲ့အတှကျ စကျမဖှငျ့ရပဲ Battery ဖွုတျလို့ရတယျဆိုရငျ Battery ကိုပါ ဖွုတျထားလိုကျပါ။
အဲ့လိုလုပျပွီးပွီဆိုရငျတော့ ကှနျပြူတာမှာ လြှပျစဈရှော့မရှိနိုငျတော့ပါဘူး။ အခွားတပျဆငျထားတဲ့ Memory Stick, Cable, Mouse အစရှိတာတှကေိုပါ ဖွုတျပဈပွီး တကယျလို့ Warranty Seal မရှိတော့ဘူးဆိုရငျ Screw Driver နဲ့ Laptop ရဲ့ RAM (ဒါမှမဟုတျ) Hard disk ကို ဖုံးထားတဲ့ အဖုံးကိုဖှငျ့ပွီး RAM နဲ့ Hard disk ကို ဖွုတျလိုကျပါ။ တခါတလေ တခြို့ Laptop တှဟော RAM နဲ့ Hard disk ကို သီးခွားမဖုံးအုပျထားပဲ အောကျခွမျးတဈခုလုံးကို ဖှငျ့ရတာမြိုးရှိတတျပါတယျ.. အဲ့ဒီလိုဖှငျ့တဲ့အခြိနျကွရငျ အောကျခွမျးဘကျမှာရှိတတျတဲ့ ကျော၊ ကလဈတှကေို မကြိုးအောငျ ကတျထူပွားအမာတဈခုနဲ့ တဖွညျးဖွညျးခှာပွီးဖှငျ့ရမှာဖွဈပါတယျ။
တကယျလို့ ဖိတျကတြဲ့ အရညျက သာမနျရမေဟုတျပဲ အအေး (သို့) ကျောဖီလို စေးကပျကပျအရာတဈခုဆိုရငျတော့ ကြှမျးကငျြတဲ့ Service Center ကို အမွနျဆုံးပို့ရမှာဖွဈပါတယျ။
တကယျလို့ ရပေဲဖိတျကခြဲ့တာဆိုရငျတော့ ပွနျပွီးခွောကျသှအေ့ောငျလုပျနိုငျတဲ့ နညျးလမျးရှိဦးမှာဖွဈပါတယျ။
ပထမဆုံးအနနေဲ့ အဝတျစတဈခုကို ယူပွီး စားပှဲပျေါမှာဖွနျ့ခငျးထားလိုကျပါ။ Tower လို ရစေုတျနိုငျတဲ့အဝတျအထူမြိုးဆိုရငျ ပိုအဆငျပွမှောပါ။ ပွီးရငျ Laptop Screen ကို ဖှငျ့လို့ရတဲ့အထိ ဖှငျ့ထားပွီး မှောကျလကျြအနအေထားနဲ့ အနညျးဆုံး တနာရီကနေ ၂ နာရီလောကျထိ အခုနကဖွနျ့ခငျးထားတဲ့ အဝတျပျေါမှာတငျထားလိုကျပါ။
ဘယျလိုကာကှယျနိုငျမလဲဆိုရငျ Laptop ဝယျယူတဲ့အခြိနျမှာ မတျောတဆရဖေိတျကတြာကို ခံနိုငျတဲ့ Spill-resistant Keyboard ပါဝငျတဲ့ Laptop တှကေို အရငျဦးစားပေးရှာကွညျ့ပါ။ အဲ့လို Spill-resistant ခံနိုငျတဲ့ Laptop တှကေ လကျရှိအခြိနျမှာ ရှားသှားပမေယျ့ အခြို့သော Brand တှမှောတော့ ရရှိနိုငျပါသေးတယျ။ ရဖေိတျကခြဲ့ရငျ Laptop ကို နောကျဖုံးဖှငျ့ရဖို့ လိုအပျနိုငျတဲ့အတှကျ အနညျးဆုံးတော့ Laptop ဝယျပွီဆိုရငျ ဘယျလိုမြိုးဖှငျ့ရလဲဆိုတာကို တဈခါထဲ စုံစမျးထားသငျ့ပါတယျ။
နောကျဆုံးအနနေဲ့ကတော့ ဘာအကွောငျးကွောငျ့ပဲဖွဈဖွဈ Laptop က ရစေိုသှားရငျ ဒီအတိုငျးမထားပဲနဲ့ အပျေါက အခကျြတှကေိုပွုလုပျပွီး အတတျနိုငျဆုံး ကိုယျ့ရဲ့ အဖိုးတနျ Data တှမေပကျြသှားအောငျ ကာကှယျနိုငျမှာပဲဖွဈပါတယျ။